တိုကျိုမြို့တွင်းရှိ စီးပွားတက်စေတဲ့ နတ်ကွန်း ၅ ခု !!!! - JAPO Japanese News
တိုကျိုမြို့တွင်းရှိ စီးပွားတက်စေတဲ့ နတ်ကွန်း ၅ ခု !!!!
သော 24 Jul 2020, 21:29 ညနေ
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစကိုကူးပြောင်းလာပြီဆို စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့အစပြုချင်ကြတာပဲ‌နော်…
၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာလည်း စီးပွားလာဘ်လာဘ ကောင်းချင်တဲ့လူတွေအတွက် တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ လာဘ်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတဲ့ နေရာ ၅ နေရာကို ရွေးချယ်ပြီးမိတ်ဆက်သွားပေးပါမယ်
၁။ Fukutoku Shrine (Chuo ရပ်ကွက် Nihonbashi)
အဆောက်အဦးတွေရဲ့ကြားမှာ ဌာပနာထားတဲ့ လာဘ်တိုးစေတဲ့ဘုရား
မြို့ရဲ့အလယ်ခေါင်မှာရှိတဲ့ နတ်ကွန်းဖြစ်ပြီး Tokugawa ခေတ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Tokugawa Ieyasu ကိုယ်တိုင်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်နတ်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်။
「芽吹稲荷」 “ Mebubuki Inari” လို့လည်းနောက်တစ်မျိုးခေါ်ပြီး နှစ်သစ်ရဲ့အစမှာ လာရောက်လည်ပတ်ရုံနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်.
ထီ စပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်သလို၊ ထီပေါက်ဖို့ဆုတောင်းကြသူတွေနဲ့ စည်ကားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Shiba Daijingu Shrine (Shiba, Minato ရပ်ကွက်)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ ကြင်ဖော်အတွက် လာရောက်ဆုတောင်းတဲ့နေရာအဖြစ်နာမည်ကြီး ပါတယ်။
「天照大御神」နဲ့ 「豊受大御神」တို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းခံရပြီး ကြင်ဖော်ဆုတောင်းတဲ့နေရာအဖြစ် သိကြတဲ့ Shiba Daijingu Shrine ပဲဖြစ်ပါတယ်။
relation ဆိုပေမဲ့ ချစ်သူကောင်လေး၊ ကောင်မလေးအတွက် relation သာမက၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှု၊ ငွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆက်စပ်မှု အစရှိသဖြင့် relation တိုင်းအတွက် ဆုတောင်းပြည့်ပါတယ်။
သေချာပေါက်လိုချင်တဲ့ “ ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်” လည်းရှိပါတယ်.
ထီရဲ့မွေးရပ်မြေလို့သိတဲ့ Shiba Daijingu Shrine ဟာ၊ လာဘ်တိုးချင်တဲ့လူတွေချည်းသာလျှင်မဟုတ်၊ ထီးပေါက်ချင်တဲ့လူတွေလည်း လာရောက်ဆည်းကပ်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
အထဲမှာလည်း အကောင်းဆုံးသောကံတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ “ ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်” ကို လိုချင်မိတယ်နော်……
၃။ Koami Shrine (Nihonbashi, Chuo-ku)
ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် လက်ထပ်ထိမ်းမြား, ကံဇာတာ
အဆောက်အဦးတွေနဲ့ အိမ်တွေနဲ့နောက်မှာ တိတ်တိတ်လေးရှိနေတဲ့ Koami နတ်ကွန်းဟာ သိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ အရမ်းတန်ခိုးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ စစ်ပြီးနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့သောသစ်သားအဆောက်အဦး နတ်ကွန်းဖြစ်ပြီး၊ အထဲမှာခမ်းနားတဲ့နဂါးပန်းပုတစ်ခုရှိပြီး မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုဖယ်ရှားပေးသောနတ်ကွန်းအဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။
၄။ Gōtokuji Temple (Setagaya ရပ်ကွက်)
Maneki Neko စတင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစေတဲ့ကြောင်အမြောက်အများကိုတန်းစီထားပြီး အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီကြောင်အရုပ်ကိုအလှဆင်ထားမယ်ဆို ကောင်းမွန်တဲ့ ကံကြမ္မာတွေရောက်ရှိလာပြီး၊ စီးပွားရေးတက်လာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
၅။ Konno Hachimangu Shrine (Shibuya ရပ်ကွက်)
လူစည်ကားတဲ့မြို့ရဲ့အလယ်မှာရှိသော်လည်း ဒီနတ်ကွန်းကတော့ ထီးထီးကြီးတည်ငြိမ်စွာနဲံတည်ရှိပါတယ်။
Heian ခေတ်ကတည်းကရှိနေခဲ့ပြီး ၎င်းကိုရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနတ်ကွန်းအဖြစ်လည်းပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့ရိုးရာယဥ်ကျေးမှုနဲ့အတူ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုဆိုင်ရာကံကောင်းစေတဲ့နတ်ကွန်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Red stamp book ကိုင်ပြီး တံဆိပ်ခေါင်းလိုက်စုကြမယ် !!!!!
မြန်မာသွေးတစ်ဝက်ပါတဲ့ ချစ်စရာ Idol မလေး
အရသာကခပ်ဆန်းဆန်း နဲ့ Toppings အလန်းစား ရေခဲမုန့် !!!!!
အစားဂျီးများတဲ့ သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဂျပန်ထမင်းဘူးလေးလုပ်ပေးရအောင် !!!!
ငြင်းဆန်တာ ကောင်းလား? မကောင်းဘူးလား ?
အာဖဂန်နိစ္စတန်အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သူ Tetsu Nakamura !! သေဆုံးခြင်း (၁) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ